သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ယခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပဲ FBSက ဖော်ဆောင်ပေးပါတော့မယ်
စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကသာ လူတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသော ခွန်အားတွေ တွန်းအားတွေဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ အလေးအနက် ယုံကြည်ထားပါသည်. စိတ်ကူးအဆန်းသစ်ဆုံး အရိုးသားဆုံးနှင့် အထူးခြားဆုံးဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို ရွေးချယ်ပြီး ထိုစိတ်ကူးတွေကို အမှန်တကယ်အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် FBSအဖွဲ့မှ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးသွားပါ့မည်.
သင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြောပြပါ. ငွေကြေးကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်လို့ ငွေကြေးအတွက်ဆန္ဒမပြုပါနှင့်. ကမ္ဘာလောကကြီးက ပျော်ရွှင်စရာတွေ အံ့အားသင့်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ကိုတကယ် ကြည်နူးပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာကိုသာ ဆန္ဒပြုတောင်းဆိုလိုက်ပါ.
-ထိုင်းနိင်ငံမှ Souphapone Phothomက စက်ချုပ်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် အပ်ချုပ်စက်တစ်လုံး ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်
-အင်ဒိုနီးရှားမှ Deah Apriဟာဆိုရင် သူ့အမေရဲ့အိမ်ဝိုင်းကို ခြံစည်းရိုးကာရံနိုင်ခဲ့ပါတယ်
-ဗင်နီဇွဲလားမှ Mrs Blanca Camargoကတော့ အ၀တ်လျှော်စက်တစ်လုံးရရှိသွားပါတယ်
Fbs၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ:
• FBSတွင် အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ
• သင်၏ personal areaရှိ ပရိုမိုးရှင်းစာမျက်နှာကို သွားရောက်ပါ
• ပုံတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပြီး သင်၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာနှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ
• FBSတရားဝင် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာရှိ မူလပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းအရာပါပို့စ်ကို လင့်ခ်အတိုင်းသွားပါ
• ထိုပို့စ်အောက်ရှိ ကွန်းမန့်တွင် သင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို ရေးပေးလိုက်ပါ
• ကျေးဇူးပြု၍, သင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြောပြပါ. သင့်ရဲ့အိပ်မက်က သင်အပြောကောင်းရင်ကောင်းသလောက် တကယ်ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေးပိုများလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်လို့ ငွေကြေးအတွက်ဆန္ဒမပြုပါနဲ့။.
သင့်မိတ်ဆွေတွေကိုပါ ပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောပြပေးလိုက်ပါ - FBSနှင့်အတူ ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ပို့စ်ကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါ.